COB လမ်းအလင်းရောင် LED ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး COB လမ်းအလင်းရောင် LED မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
COB လမ်းအလင်းရောင် LED
ကျနော်တို့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောများမှာ Taiwan COB လမ်းအလင်းရောင် LED ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ပို့ကုန်နှင့်စက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် oriented အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုကွဲပြားကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ရရှိခဲ့ပါတယ်သောနိုင်ငံတကာစျေးကွက်၏တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးလိုအပ်ချက်ကိုကိုက်ညီသောထုတ်ကုန်များပြည့်စုံသည့်အကွာအဝေးကိုဆက်ကပ် Taiwan တင်ပို့သူ။ ကျနော်တို့ကြောင့်ဖောက်သည် impeccable ထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့ကျွန်တော်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုဤကဏ္ဍအတွင်းဦးဆောင်ကုန်သည်များတစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင်ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ကြိုးစားနေသူကတည်းကကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်မှုကစျေးနှုန်း & အရည်အသွေးကဖောက်သည်ကျေနပ်မှုမောင်းနှင်နှစ်ပေါင်းကျော & စဉ်အကြှနျုပျတို့ခွ၌ထားကြ၏။
ပုံစံ - Economic
သဘာဝအလင်းရောင်သို့ CRI ရှိရိုးရာမီးများသိသိသာသာတိုးတက်မှု.ပိုမိုကောင်းမွန်သော CRI ပိုမိုမြင့်မားသောလမ်းနှင့်လမ်းဘေးမျက်နှာပြင်များတွင်သေးငယ်သောကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်သိမ်မွေ့သောဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းလဲမှုများကိုထွန်းလင်းပေးသည်.မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားများနှင့်လမ်းလျှောက်သူများအားလုံးသည် LED street illumination အောက်ရှိအရာအားလုံးကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်.
အချိုးကျမှန်ဘီလူးပုံစံ(Beam ထောင့်:132 ဒီဂရီ).
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/cob-led-street-light.html
အပြာရောင် LED လမ်းမီး
အကောင်းဆုံး COB လမ်းအလင်းရောင် LED ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် COB လမ်းအလင်းရောင် LED မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ